Xaalada Amaan ee Somaliland oo Burbur Qarka u Saaran – Rasaasa News
Xaalada Amaan ee Somaliland oo Burbur Qarka u Saaran
Sep 25, 2010 alshabaab, ethiopia, ONLF, security threat., Somaliland
Madaxweyne Siiraanyo oo maamulkiisa cusub uusan hanan karin amaanka maamulgabaleedka Waqooyi Galbeed Somaliya [somaliland], lagana yaabo in uu xaalkeedu noqdo sida xaalka Muqdisho.
Wakaalada wararka ee Indian Ocean, ayaa waxay todobaadkan qortay qormo ay ugu magacdartay [The new President of Somaliland is confronted with his first serious security crisis barely two months into his presidency, which began on 27 July].
Jariiradu waxay aad ugu dheeraaray sida uu ururka Alshabaab ugu xoogan yahay Somaland. Waxaa kale oo ay Jariiradu soo qaadatay labada gabal ismaamul gabaleed ee la sugayo in ay dhakhso uga go,aan Somaliland [SSC iyo Awdalland].
Maamul gabaleedyadan cusub waxay dhamaystirteen wax alaale wixii uu maamul gabaleed u baahnaa, waxayna haystaan taageerada dadweynaha gabaladaas.
Arimahan burburka ah waxaa somaliland u soo jiiday madxweynaha cusub ee somaliland oo la yimid siyaasad aad uga badalan siyaasadii qunyar socodka ahayd ee madaxweynihii tagay Daahir Riyaale.
Madaxweyne Siiraanyo kolkii uu xafiiska yimidba waxaa uu furay arimo badan oo aan ka jirin gabalka, taageerida ururka ONLF, dib u midaynta Somaliweyn iyo isaga oo wadahadal hoose la furay ururka Alshabaab. Waxaa kale oo uu laalay xidhiidhkii u dhaxeeyay mudada dheer Itobiya iyo maamulka Somaliland.
Waxaa 10 September 2010, ka soo degay xeebaha Somaliland 240 dagaal yahan oo ka tirsan ururka ONLF, oo sida la filayo uu maamulku gacan siinayey, balse kolkii dambe dafiray in ay ka warhayeen.
Waxaa la sugayaa in xili dhaw ay xeebaha ka soo daadtaan ciidamada ururka Alshabaab, sidaasina ay kula wareegaan gacan ku haynta somaliland.
Dawlada Itobiya waxaa saaran waajibaadka difaaca dalkeeda, waxayna diyaar u tahay in ay moosto inta uusan daadku soo galin.
Beesha Maalin-guur, oo Soo Saartay Baaq Taageero Heshiisyada Nabada ee Dawlada iyo ONLF